Bath, a nnọọ British ebe | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | England, Ihe ị ga-ahụ
Ọ bụrụ na akwụkwọ akụkọ na-amasị gị Jane Austen ma ọ bụ ihe ọ bụla English ịse na-ewe ebe na narị afọ nke XNUMX, mgbe ahụ ị ga-anụrịrị nke Bath. Ee, spa nke klas nke Bekee nke oge ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ alma mater nke njem nlegharị anya nke ga-abịa ma emechaa dị ka ụlọ ọrụ na-enweghị anwụrụ ọkụ.
You makwaara nke ahụ Bath bụ World Heritage Site? Eeh, o nwere akụkọ ihe mere eme nke otu puku afọ, na mgbakwunye na ịnwe nnukwu isi maka ụlọ ọrụ Bekee na narị afọ XNUMX. Yabụ, dịka ị pụrụ ịhụ, obodo ahụ nwere ihe karịrị otu amara na nke ahụ pụtara na ịnọ na mba ahụ ga-enwerịrị, ee ma ọ bụ ee, gaa ịgagharị na ya.
1 Bath na oge Rom
2 Gị Bath
Bath na oge Rom
Bath tọrọ ntọala na narị afọ nke XNUMX AD site n'aka ndị Rom na ka ọ na-erule mgbe ahụ ọ jisiri ike gafee Channel Channel. Mmiri mmiri na-ekpo ọkụ, nke sitere n'okike mere ka ọ ghọọ ebe ochie, ọ bụ ezie na ọ dịlarịn Ọla nchara Oge ndị mmadụ biri.
N'ezie, ugwu nke na-eleghara obodo ugbu a anya, Solsbury Hill, n'oge ahụ bụ ebe ewusiri ike na ihe owuwu ndị ọzọ marakwa site na nchọpụta ihe ochie. Etie nte mbon Rome ẹma ẹda ndusụk itieuwa ẹnyụn̄ emelitere gaa n'òtù nzuzo ya. N'ihi ya, a raara ụlọ nsọ a raara nye chi nwanyị Sulis nye Minerva. Ka oge na-aga, na narị afọ ndị sochirinụ, akụrụngwa nke ihe ndị dị n'oké okpomọkụ kwesịrị ịmalite.
Ugbua na narị afọ II AD ihe a na-enwe n'otu ebe ịsa ahụ ndị Rom pụtara: ndị caldarium, nke tepidarium na frigidarium. N'aka nke ya, mgbidi oge ochie gbara mgbidi Rome gburugburu, mana n'ikpeazụ, site na ọdịda nke alaeze ahụ na narị afọ nke ise ihe ọ bụla adabaghị. Ka ọ na-erule narị afọ nke itoolu, usoro nke ndị Rom mepere emepe apụọla na ala ndị ahụ bụ nke eze.
Ka oge na-aga obodo ahụ toro n'okpuru nchedo nke abbey. Ewuru iyi ọhụrụ na-ekpo ọkụ n’akụkụ isi mmiri ahụ ma emesịa obodo ahụ nwetara nrịgo na ọdịda niile nke akụkọ ntolite ọchịchị nke ala-eze ahụ. E wuru ọtụtụ mpaghara obodo ahụ na Stuart oge na otu na oge Georgia., nke bụ mgbe ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa rịrị elu. Oge a bụ kpọmkwem ihe gosipụtara na akwụkwọ akụkọ Jane Austen.
Bath dị na ndagwurugwu avalon, ugwu gbara ya gburugburu. Osimiri ahụ na-abụbu nke na-adịghị agbanwe agbanwe na nke jupụtara na iyi na ebe idei mmiri na ọdọ mmiri, abanyela n'otu ọwa na nsogbu ide mmiri ahụ kwụsịrị na 70s nke narị afọ nke XNUMX.
Mmiri ọkụ, Mmiri, si na ugwu Mendip pụta. Ha sitere na mmiri ozuzo nke na-abanye n'ime ụwa ma na-aga kpọmkwem na aquifers nke nwere ihe karịrị mita 2500. N'ebe ahụ, n'ihi ike ikuku mmiri, okpomọkụ nke mmiri na-ebili na okpomọkụ dị n'etiti 60 na 96 ºC. N'okpuru nrụgide, mmiri ahụ na-ebili n'elu, na-amịpụ n'etiti mgbawa na limestone, ndị njem na-ejikwa ya.
Bath nwere ihu igwe dị jụụ karịa obodo ndị ọzọ n'agbanyeghị mmiri na-ezo nke ukwuu. Ọ na-agbakọ na n'oge ọkọchị, ọnọdụ okpomọkụ dị gburugburu 21ºC. Enwere obere ekele maka eriri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke gbara ya gburugburu na nke edepụtara na 50. Ihe ndị a niile na-eme ka o doo anya na njem nleta na-abụ isi igwe obodo.
Kedu ihe anyị nwere ike ime na Bath? Obi abụọ adịghị ya, buru ụzọ mara nke ahụ ihe ochie nke ahụ dị n'etiti. Na baths roman ochie ha dị n'okpuru ala ala dị ugbu a, ma e nwere ogidi na ntọala dị nnọọ ochie. Mgbe ahụ e nwere Bath Abbey nke, ọ bụ ezie na ọ emeela agadi, nwere ụlọ ọ malitere kemgbe narị afọ nke XNUMX na nke mara mma nke ukwuu.
Ọtụtụ n'ime buildingslọ ndị ahụ malitere na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX na ụdị ụzọ Georgia bụ nke kachasị, nwere ihu ọma doro anya, nke e wuru na okwute mpaghara. Taa, ọtụtụ n'ime ụlọ ndị a bụ ụlọ oriri na nkwari akụ n'ihi ya, ọ bara uru ịnọ chi ọbụbọ iji hụ ndụ Bath. Ma ọ bụ ihe gara aga gị.
The Circus Ọ bụ ebe njem na Bath. Ọ bụ ihe ogologo akụkụ nke John Wood mere nke na-enye ohere maka oghere okirikiri mepere emepe nke emere maka mmemme ma ọ bụ egwuregwu. Na a ikuku, na Colosseum na Rome nwere atọ facades na a dị iche iche ụkpụrụ ụlọ ịke ọ bụla, na ogidi: Ionic, Doric na Kọrint. N'ime mbara ala ndị a kachasị dị egwu Royal ọnwa malitere site na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke iri na asatọ, mana ndị ọzọ mara mma dị mma Somerset Pace o Lansdown Ebe Obibi.
N'ime Avon River e nwere neoclassical akwa, na Akwa Pulteney. O nwere arcades nke azụmahịa, ọ bụ ya mere o ji yie Ponte Vecchio a ma ama na Florence, ma agbanwebeghị kemgbe e wuru ya. Ụlọ mgbapụta, n'okporo ámá ndị Georgia, ụlọ Guild, okporo ụzọ, ihe nkiri nke obodo ahụ na e nwere ise na ha niile bụ ndị a ma ama, ha ngosi nka...
Dịka ị pụrụ ịhụ, otu ụbọchị naanị na Bath ezughị: enwere ụgbọ mmiri, njem ụgbọ ala, njem ndị a na-eduzi na njem ụbọchị site na Bath. Ihe niile bara uru. Eziokwu bụ na ọwa mmiri gbara Bath gburugburu ma nwee ike nyochaa ụgbọ mmiri, enwere njem ogologo oge, yana nkata picnic, ma ọ bụ ịnwere ike ịbanye Bathampton. Ọ bụrụ na ị na-eme njem na ndị enyi ị nwere ike ịgbazite nnukwu ụgbọ mmiri ma chọpụta n'onwe gị ma ọ bụ rie na naanị ụlọ oriri na ọ floụ floụ na-ese n'elu mmiri n'obodo, John Renee.
Enwekwara njem ụgbọ ala na kpochapụwo hop na iwuli elu. Visit gara na saịtị ndị mara mma nke Bath na-enweghị ịga ije dị anya, ma ị banye n'ụgbọ ị mụtara banyere akụkọ ntolite Britain n'ụzọ kachasị izu ike. Ọbụna enwere njem njegharị na-aga Stonehenge, Glastonbury, Cotswolds...
Ma o doro anya na Bath bụ isi iyi dị ọkụ enwere mmiri oku na spa iji mee ihe. Ime ụlọ ịwụ ahụ nke oge a bụ ndị Ụlọ ọrụ Thermae Bath Spa, na ọdọ mmiri na mbara ala na ọrụ ndị na-eme ka uche na ahụ dị jụụ. Echiche ndị dị na mbara ala ahụ dị egwu mana ị nwekwara ike ịhọrọ n'etiti usoro ọgwụgwọ 40 dị iche iche. Kwesighi ịghọ onye otu ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ, ị ​​nwere ike ịkwụ ụgwọ naanị elekere abụọ nke spa, dịka ọmụmaatụ, maka ọnụahịa nke 40 pound. Ihe a na-enye dị ọtụtụ, ebe ọ bụ na nke a abụghị naanị ụlọ nkwari akụ na-enye spas na ọgwụgwọ.
N’ikpeazụ, Bath na-asa ahụ Roman baths na baths nke oge a. O yiri Jane Austen. Onye edemede ahụ biri ebe a n’agbata 1801 na 1806 ma ị nwere ike ịgbaso nzọụkwụ ya site na akwụkwọ akụkọ ya. Enwere Austlọ Jane Austen ma odi kwa a Ememe Jane Austen na a Tanyị Jane Austen nke gunyere uwe Devid agụghị ndị gbara. Ana m anwụ anwụ! Ya mere, ị maara, ọ bụrụ na ị gaa England, gaa njem nke Bath!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » England » Bath, a nnọọ British ebe